ကျန်းမာရေး Archives - Page3of 142 - BuzzFeed Myanmar
အမျိုးသား များ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစား ဖွံ့ထွားသန်မာစေဖို့အတွက် ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်
အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် ရှိကြပြီး လိင်အင်္ဂါ သေးကွေးနေလျှင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းကာ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အခြား လူမှုဘဝမှာပါ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကြုံရလေ့ ရှိပါတယ် ။ ဒိအတွက်ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ် စရာမလိုပဲ လိင်ခေါင်းရောဂါကို ဒီလိုတိုက်ဖျက်ကြမယ်…
တစ်ရက်လျှင် အရက် တစ်ခွက်သောက်သုံးရုံမျှဖြင့် အသက်တိုနိုင်ကြောင်း သုတေသနစစ်တမ်းများ ဖော်ပြ
အန္တရာယ် ရှိသော ကြက်သွန်နီ ခြမ်း (နေ့တိုင်းဟင်းချက်ရင်အသုံးပြုတာမို့ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်နော်)
ထက်ခြမ်းခွဲထားသော ကြက်သွန်နီ ကို ချက်ချင်းအသုံးမပြုနိုင်ပဲ ရက်ကျော်လွန်သွားလျှင်ပြန်၍အသုံးမပြုသင့်ပါ။ မစားသင့်ပါ။ အန္တရာယ် ကို ဖြစ်စေပါသည်
ထမင်း စားရင်းဖြစ်စေ ထမင်းစားပြီးဖြစ်စေ ရေသောက်တဲ့ အကျင့်ရှိရင် ဒီပို့ကို ကျော်မသွားပဲ ကြည့်သွားပါနော်
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း
ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ဂျပန်လူမျိုး တွေ ဟာ ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေနွေး သောက်သုံးတဲ့အလေ့ ရှိကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကျောက်ကပ် အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက်
သင့်ရဲ့ ကျောက်ကပ် အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက် ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေချိန်၌ heart attack ရခဲ့သော်
ညနေ ၆း၁၅ လောက်မှာ သင်ဟာအိမ်ကိုတစ်ယောက်တည်းပြန်လာနေတယ် ဆိုကြပါစို့ ။ အလုပ်မှာကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားပင်ပန်းခဲ့ တဲ့ နေ့ ဆိုပါတော့။သင်ဟာ တကယ်မောပန်းစိတ်ပျက်နေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီချိန်မှာရုတ်တရက် ရင်ခေါင်းထဲကပြင်းထန်တင်းကြပ်နာကျင်မှုမျိုး သင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။အထဲက လက်နဲ့ဆွဲဆုပ်ညှစ်ထားသလိုမျိုး၊ ရင်ဘတ်ပေါ် လူတစ်ယောက် တက်ထိုင်ထားသလိုမျိုး ခံစားရပြီးအရမ်းပြင်းထန်လို့ ချွေးသီး ချွေးပေါက် တွေတောင် ကျလာပါတယ်။ ဒီနာကျင်မှုဟာ လက်မောင်းတွေ၊ မေးရိုးတွေအထိထုံကျင်ပျံ့ နှံ့ သွားပါတယ်။
`မလိမ္မာ တခါမိုက်´ရုံဖြင့် အသက်၁၉နှစ်အောက်သမီးငယ်များ မိခင်လောင်းဘဝရောက်ကြရပါတယ်။ ထိုအခါမျိုးတွင် အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ရပါသလား? ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကလေးမွေးဖွားနိုင်ပါသလား? ဟူသော မေးခွန်းပေါင်းစုံ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင်လည်း ရာသီမလာခြင်၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း စသည်တို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။